Maxay tahay sababta Erdogan uusan xiriir ula yeelan karin Israel? - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada Maxay tahay sababta Erdogan uusan xiriir ula yeelan karin Israel?
Maxay tahay sababta Erdogan uusan xiriir ula yeelan karin Israel?
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyib Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu jeclaan lahaa in uu xiriir wanaagsan la yeesho Israel, laakiin wuxuu dhaliilay siyaasadda Israel ee ku wajahan Falastiiniyiinta oo uu ku tilmaamay mid “aan la aqbali karin” iyo “khad cas” oo ay leedahay Ankara.
Erdogan ayaa si kastaba sheegay in wada-hadalladii sirdoonka ee labada dhinac ay dib u billaabmeen.
Labada dal ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf xooggan sanadihii la soo dhaafay, in kasta oo xiriir ganacsi oo adag uu dhex maray.
Ankara ayaa si isdaba joog ah u cambaareysay haysashada Israel ee daanta galbeed iyo sida ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta.
Isagoo la hadlaya wariyeyaasha kadib salaaddii Jimcaha ee magaalada Istanbul, Erdogan waxa uu sheegay in Turkiga ay aragtiyo ka qabaan “dadka xilalka u sarreeya ka haya” Israel iyo in xiriirku uu sidaas “aad uga duwanaan lahaa” haddii aysan arrimahaasi jirin.
Turkiga iyo Israel, oo ahaa xulafo, ayaa midba waxa uu eryay diblomaasiga dalka kale sanadkii 2018-kii, ka dib isku dhacyo ay ciidamada Israel ku dileen daraasiin Falastiiniyiin ah xadka magaalada Gaza. Ankara iyo Tel Aviv ayaa sii wada in ay uu sii shaqeeyo is-weydaarsiga ganacsi ee labada dal.
Hadalka Erdogan ayaa imanaya ayada oo dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrian, Sudan iyo Morocco oo dhammaantood ah Islaam ay xiriir rasmi ah la aas-aasteen Israel.
Previous articleKhasaaraha ka dhashay Banaanbaxa ka socda Beledweyne oo kordhay+Wararkii ugu danbeeyay
Next articleDEG DEG: Xildhibaan Katirsan Nabad & Nolol Ah Oo Sir Villa Soomaaliya Qarineysay Kashifay
DEG DEG DAAWO: Muuqaalki Galmada Ahaa Ee Laga Duubay Fahiima iyo Cajalad Sir Ah Soo Helay daawo
DEG DEG Jubbaland oo la weeraray iyo Shacabka Kismaayo oo qax bilaabay